I-Collagen yezinwele - Izinzuzo ezinkulu | Bezzia
Izinzuzo ezi-5 ze-collagen zezinwele
USusana godoy | 08/05/2022 18:00 | Ubuhle
Sonke sizwile nge-collagen futhi inesibopho sokwengeza ukunwebeka okwengeziwe esikhumbeni sethu, futhi ukuqinisa izinzipho kanye-ke, izinwele. Ukuba amaprotheni emvelo, kungaphezu kwenzuzo emzimbeni wethu, kodwa, Uyazi izinzuzo ze-collagen izinwele?
Maningi amakhambi esiwafunayo ukuze izinwele zethu zihlale zinempatho engcono kakhulu. Nokho, kulesi simo akufanele sibheke okunye ngoba i-collagen izokunikeza konke okudingayo. Nakuba umzimba uwukhiqiza ngokwemvelo, akunakugwenywa ukuthi ngenxa yokuhamba kwesikhathi uzokwehla. Ngakho engeza leyo mali eyengeziwe futhi ujabulele zonke izinzuzo.
1 Izinzuzo ze-collagen ngezinwele: ingeza ukukhanya okwengeziwe
2 Yenza kabusha amathiphu
3 Yenza izinwele zakho zibukeke zijiyile futhi zivimbele ukulahleka kwezinwele
4 Valelisa ekuphelelweni amanzi emzimbeni
5 izinwele zizokhula ngokushesha
Izinzuzo ze-collagen ngezinwele: ingeza ukukhanya okwengeziwe
Ukuba nokukhanya okuncane ezinweleni zakho kubonakala kuwumsebenzi olula, kodwa akunjalo ngaso sonke isikhathi. Njengoba ukuyibona, sidinga izinwele ukuze zinakekelwe ngempela futhi ziphile. Nakuba sizama, akukho okufana nokubheja ku-collagen ngomsebenzi ofana nalo. Yingakho, ngaphezu kokunakekelwa ngokwako, kuzokwenza izinwele zethu zibe nokucwebezela okuhle. Njengoba sisho, ngokubona nje sizokwazi ukuthi sibhekene nezinwele ezinempilo.
Yenza kabusha amathiphu
Nakuba ukukhanya kubalulekile, iziphetho zezinwele azikude ngemuva. Njengoba njengoba sazi, sihlala siqaphela kubo, ukuwasika, ukwengeza i-hydration eyengeziwe ukuze bangavuli. Kodwa ngezinye izikhathi iziphetho ezihlukene azinakugwenywa. Kunjalo, ukwenza isiqiniseko sokuthi awubaboni futhi, akukho okufana ne-collagen. Yebo, kungenye yezinzuzo ezinkulu eziba ngokoqobo ngokuphazima kweso.
Yenza izinwele zakho zibukeke zijiyile futhi zivimbele ukulahleka kwezinwele
Kungenye yezinzuzo esiphinde sizithande kakhulu. Ngoba uma ubona ukuthi izinwele zakho zibuthakathaka futhi ziwa kalula, kufanele wazi ukuthi kungaba ngenxa yezizathu ezahlukene. Kodwa uma kungekho eyodwa ngokukhethekile, mhlawumbe kungenxa yokuthi lobo buthakathaka bungaphathwa ngokushesha ngenxa ye-collagen. Yebo, kulokhu Kuzophinde kumenze agweme ukuwa kwakhe futhi ngesikhathi esifanayo, kumnike amandla engeziwe. Ngakho-ke izinwele ezincane kakhulu noma ezibuthakathaka zizobukeka ziqinile futhi zikhulu, ngomzimba. Ngakho ngokungangabazeki, yinto obuyifuna ngempela.
Valelisa ekuphelelweni amanzi emzimbeni
Elinye lamaphuzu ayisisekelo uma sikhuluma ngokunakekelwa kwezinwele ukugcwala kwazo. Ngoba noma nini lapho sikhuluma ngokunye ukwelashwa, asikhohlwa ukuthi siyakudinga ukulwa nokoma. Njengoba ngaphandle kwakho konke kubalulekile, lokhu kusekuncane kakhulu. Ungasebenzisa izinhlobo ezahlukene zemikhiqizo kokubili ethengiwe neyasekhaya ngale njongo. Kodwa ngokubona izinzuzo ze-collagen, sizoba nakho konke endaweni eyodwa. Uzojabulela izinwele ezithambile nezondlekile ngokugcwele.
izinwele zizokhula ngokushesha
Uma usebenzisa i-collagen ukwenza a ukubhucungwa ekhanda, khona-ke lokhu kuzokwenza ama-follicles abe namandla. Okuzosiholela ekuqapheleni ukuthi ukuwa kunciphisa kanjani futhi nakho, sizobona ukuthi izinwele zithatha amandla amaningi futhi zizokhula ngokushesha. Impela izikhathi eziningi uye wabheka izixazululo zokukhula ngokushesha kwezinwele, ngoba ucishe ube nazo ezandleni zakho ngenxa yaleli phrotheni elifana ne-collagen.
Ngingayisebenzisa kanjani i-collagen? Unayo ngamafomethi ahlukahlukene njengama-ampoules noma amaphilisi, udokotela wakho angawanikeza. Yebo kukhona itiye le-collagen futhi ungakhohlwa yonke imikhiqizo yobuhle nayo enayo. Ngakho-ke, ngaphandle noma ngaphakathi, kuyohlale kungumngane omkhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Izinzuzo ezi-5 ze-collagen zezinwele
Ingabe usunawo amathikithi akho kulawa mafestiveli omculo kaJulayi?